Ọrụ na ụdị nke na-eweli ndidi | Ahụike JBH
Ọrụ nke ebuli maka ndị ọrịa mkpọnwụ:
Gagharị ndị mmadụ na-agagharị na-adịghị mma site n’otu ọnọdụ gaa n’ọzọ nwere ike ibuli onye ọrịa ahụ site na ala gaa n’elu akwa; enwere ike ịmeghe ụkwụ chassis ka ị bịaruo onye ọrịa nso; ụkwụ azụ nwere breeki nwere ike ịme breeki iji gbochie ibuli onye ọrịa mgbe ebuliri onye ọrịa Bugharịa ma mee ka mmerụ ahụ na-enweghị atụ nye ndị ọrụ nọọsụ ma ọ bụ ndị ọrịa. Enwere ike ịgbanwe mgbanaka ahụ na-ebuli 360 Celsius, nke nwere ike ibugharị onye ọrịa ahụ site n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Sling pụrụ iche nwere ike ịhazigharị ọnọdụ ahụ, na slings nke agba dị iche iche n'ọtụtụ ọkwa dị mma maka onye ọrụ iji dozie ọnọdụ ahụ. Enwere ike iji ọrụ ịkwụsị mberede wee belata ike na oge dị mkpa iji kpuchido nchekwa nke ndị ọrụ na ndị ezinụlọ. Ọ nwere ike ịdị mfe na ngwa ngwa gbasasịa ma apịaji maka ibugharị.
A na-ejikarị ụdị nkwalite ekwentị na-ejikarị ụlọ ọrụ ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọgwụ. A na-eji ha emegharị ihe dịka oche na ihe ndina nke ihe na-agagharị n’elu ya ma ọ bụ dina n’elu mbuli ya.
A na-eji mbuli maka steepụ na-agagharị iji nyere ndị na-adịghị mma aka ịrịgo na ịrịda na steepụ, mana ihe na-agagharị naanị enweghị ike ịme onwe ya. Onye aghaghi inye aka iji hụ nchekwa.
A na-etinyekarị ndọtị ndozi n’elu ala n’akụkụ ihe ndina ahụ, nweekwa ogidi ndị etinyere na nkuku anọ nke ụlọ ahụ, kwadebere ya na slings iji mee ka ihe ndị na-agagharị agagharị na-agagharị n’usoro nke usoro egwu ahụ.
Ihe eji ebu ugbo elu bu mbuli nke na ebughari ihe na ebughari na ebumnuche ya na èbè ya na uzo ozo etinyere n’elu ulo. Ihe ọghọm bụ na ntinye nke egwu ahụ chọrọ owuwu, ma ozugbo etinyere ya, enweghị ike gbanwee ọnọdụ nke egwu ahụ, itinye ego ahụ buru ibu, yabụ ọ dị mkpa iji nlezianya họrọ.
Bè ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke eletrik eletrik. Enwere ike kewaa ya n'ụdị èbè, ụdị a fụchiri afụchi, ụdị ụkwụ gbajiri agbaji (nke zuru ezu, nke ọkara), ụdị mposi, wdg, na ọbụna ụdị oche (ụdị oche bat, ụdị oche) Na nkọwa ndị ọzọ pụrụ iche.
Ndị agadi na-arịa ọrịa siri ike, ndị aka ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ndị na-amaghị ihe ma ọ bụ ndị na-adịghị ahụkebe maka ọrụ ndị agadi, ma ha dina n'ụlọ, n'ụlọ ndị nọọsụ, ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ, nlekọta ịsa ahụ, nlekọta nsị, na ịdị mma nke ndụ bụ nsogbu dị mkpa. Maka ndị ọrịa a ma ọ bụ ndị agadi, a ga-ehichapụ akpụkpọ ahụ dum site na ịchacha. Onye na-elekọta ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ndị ikwu nọ n’ụlọ nwere ike ijide efere ma ọ bụ bọket nke mmiri ọkụ, jiri akwa nhicha ahụ hichaa ya, ma fụchaa ya. Maka na ọ naghị adasi ike iji ncha dị ka ncha na ịsacha ahụ mgbe ị na-ehicha, ịzachapụ adịghị ọcha ma zuo oke. Karịsịa maka eriri afọ ure na ụbụrụ, ịdị ọcha nke nchacha dị oke. Mmetụta nke ịkwọcha dịkwa njọ karịa ịsa. N'ụzọ dị mma, ndị ọrịa a ma ọ bụ ndị agadi enweghịzi ike igosipụta mmetụta ha. Maka ndị ọrịa a ma ọ bụ ndị agadi ndị dina n'ihe ndina ogologo oge na enweghị ike ilekọta onwe ha, ọ bụghị ihe ọjọọ ịnweta mmadụ inye aka na ntanetị mgbe niile. . Ya mere, ndị ọrịa a ma ọ bụ ndị agadi na-ebu isi na-adịghị mma mgbe niile, nsogbu ọrịa urinary tract na akwa akwa dị oke, yana ndụ dị oke ala.
Enwere ike iji ụdịrịrị ebuli a n'ụlọ na ụlọọgwụ. Mgbe etinyere R&D na mmepụta na ahịa, ọ na-adọta uche onye ọ bụla ozugbo na mmata ya, n'ihi na mbuli ahụ na-edozi nnukwu nsogbu nke ndị ọrịa na-arahụ ụra, nke ndị ọrịa na ndị nọọsụ na-amasị. Site n'enyemaka nke ụdị mbuli a, ndị agadi ma ọ bụ ndị ọrịa nwere ike ịsa ahụ kwa ụbọchị, na-ebelata akpụkpọ ahụ na ọrịa urinary nke ndị ọrịa na-arahụ ụra na ndị agadi, na-ewepụ isi pụrụ iche na ahụ. Ọ bụrụgodi na ị dina n’elu ihe ndina gị ogologo oge, ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ịnụ ụtọ mmiri. Mee ka ahụ dum dị ọcha ma kpọọ nkụ, na-eme ka ndụ ndị agadi na ndị ọrịa na-enwe nsogbu na-enweghị atụ.
zuru ezu akpaka ụlọ ọgwụ bed, ike ụlọ ọgwụ, ọgwụ na-ewepu ọgwụ, nkpuchi ihu ọnụ, recliner bed maka ndị ọrịa, akwa na-elekọta akwa,
ọgwụ na-ewepu ọgwụ, zuru ezu akpaka ụlọ ọgwụ bed, nkpuchi ihu ọnụ, ike ụlọ ọgwụ, akwa na-elekọta akwa, recliner bed maka ndị ọrịa,